के परमेश्‍वर हुनुहुन्छ? परमेश्‍वरको अस्तित्व छ? | बाइबलसम्बन्धी प्रश्‍नहरू
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आम्हारिक आर्मेनियन इग्बो इटालियन इटालियन साङ्केतिक भाषा इन्डोनिसियन इबान इलोको ईवी एस्टोनियन किकाओन्डे किन्यारवान्डा किरून्डी किर्गिज कोरियन क्याटालान क्रोएसियन क्षोसा गा ग्रीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ क्यान्टोनिज (सरल) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चिली साङ्केतिक भाषा चेक जर्जियन जर्मन जापानी जुलू टगालोग टर्कमेन टर्किश टाटार डच डेनिश ताइवानी साङ्केतिक भाषा तामिल तेलगु त्वी त्सोंगा थाई नर्वेली नेपाली पंगासिनन् पापियामेन्टो (अरुबा) पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पोर्चुगिज पोर्चुगिज (पोर्चुगल) पोलिश फिजियन फिनिश फ्रान्सेली बिस्लामा बुल्गेरियन भियतनामिज मले मल्यालम मालागासी माल्टिज म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रूसी रोमानियन लिंगाला लिथुआनियन वारे-वारे शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) सिंहला सिबेम्बा सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) स्पेनिश स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिलिगेनोन
हुनुहुन्छ। बाइबलले परमेश्‍वर साँच्चै हुनुहुन्छ भन्‍ने जोडदार प्रमाणहरू दिन्छ। यसले हामीलाई परमेश्‍वरमा अन्धाधुन्ध विश्‍वास गर्न सिकाउँदैन। बरु, आफ्नो “सोचविचार गर्ने क्षमता” अनि “बौद्धिक क्षमता” चलाएर परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्न प्रोत्साहन दिन्छ। (रोमी १२:१; १ यूहन्‍ना ५:२०) तल दिइएका बाइबलआधारित तर्कहरू विचार गर्नुहोस्‌:
व्यवस्थित ब्रह्‍माण्ड अनि यसमा जीवन सम्भव हुनुले सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ भन्‍ने कुराको सङ्‌केत दिन्छ। बाइबल भन्छ: “हो, हरेक घर कसै न कसैद्वारा निर्माण गरिएको हुन्छ तर सबै थोक निर्माण गर्ने त परमेश्‍वर नै हुनुहुन्छ।” (हिब्रू ३:४) यो तर्क सरल भए तापनि थुप्रै विद्वान्‌ले यो तर्कलाई सर्मथन गर्छन्‌। *
मानिस भएकोले हामीमा जीवनको उद्देश्‍यको के हो भनेर बुझ्ने चाहना छ। हाम्रो सबै भौतिक आवश्‍यकता पूरा भए तापनि त्यो चाहना भने हराउँदैन। यो कुरालाई बाइबलमा ‘परमेश्‍वरको मार्गनिर्देशनको खाँचो महसुस गर्नु’ भनेर बताइएको छ जसमा परमेश्‍वरको विषयमा जान्‍ने र उहाँको उपासना गर्ने चाहना समावेश छ। (मत्ती ५:३; प्रकाश ४:११) हामीमा यस्तो आध्यात्मिक आवश्‍यकता हुनुले परमेश्‍वर साँच्चै हुनुहुन्छ भन्‍ने कुराको प्रमाण दिन्छ। साथै, यसबाट परमेश्‍वर हामीले आफ्नो आध्यात्मिक आवश्‍यकता पूरा गरेको चाहने मायालु सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ भनेर पनि देखिन्छ।—मत्ती ४:४.
बाइबलले शताब्दियौं अघि गरेको भविष्यवाणीहरू सही साबित भएका छन्‌। भविष्यवाणी विस्तृत र सही भएकोले त्यो जानकारी परमेश्‍वरबाट आएको हो भन्‍ने कुरामा ढुक्क हुन सक्छौं।—२ पत्रुस १:२१.
बाइबल लेखकहरूसँग भएको वैज्ञानिक ज्ञान त्यतिबेलाका अरू मानिसहरूसँग थिएन। उदाहरणको लागि, प्राचीन समयमा थुप्रै मानिसहरू पृथ्वीलाई हात्ती, बँदेल वा साँढेजस्ता जनावरहरूले थामिराखेको छ भनेर विश्‍वास गर्थे। त्यसको ठीक उल्टो, बाइबलमा परमेश्‍वरले पृथ्वीलाई “शून्यतामा” झण्डाउनुभयो भनी बताइएको छ। (अय्यूब २६:७, NRV) त्यसैगरि, बाइबलले पृथ्वीको “परिधि”-बारे उल्लेख गरेर यो गोलाकार छ भनेर सही जानकारी दिन्छ। (यशैया ४०:२२, NRV) बाइबल लेखकहरूले विज्ञान सम्बन्धी त्यस्तो गहिरो कुराहरू बुझ्न सक्नुको कारण तिनीहरूले त्यो जानकारी परमेश्‍वरबाट पाएकोले हो भनेर थुप्रै मानिसहरू मानिलिन्छन्‌।
बाइबलले जीवनका महत्त्वपूर्ण प्रश्‍नहरूको जवाफ दिन्छ। जुन प्रश्‍नहरूको चित्तबुझ्दो जवाफ नपाउँदा थुप्रै मानिस नास्तिक बन्छन्‌। उदाहरणको लागि, यदि परमेश्‍वर मायालु अनि शक्‍तिशाली हुनुहुन्छ भने संसारमा किन यत्ति विघ्न दुःखकष्ट र दुष्टता छ? धर्महरू किन प्रायः असल कामको लागि नभई खराब कामको लागि जिम्मेवार मानिन्छन्‌?—तीतस १:१६.
^ अनु.4उदाहरणको लागि, ब्रह्‍माण्डको विषयमा एक अन्तरिक्षयात्री एलन सान्डेजले यसो भने: “यस्तो व्यवस्थित ब्रह्‍माण्ड संयोगले आएको हो भन्‍ने कुराको कुनै आधार पाइनँ। ब्रह्‍माण्ड व्यवस्थित हुनुको पछाडि केही न केही कारण पक्कै हुनुपर्छ। परमेश्‍वरको अस्तित्वमाथि शङ्‌का त लाग्छ तर ब्रह्‍माण्डमा भएका कुराहरूलाई विचार गर्दा सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ भन्‍ने कुरा साँच्चै तर्कसङ्‌गत लाग्छ।”